Zvita 06, 2019
Kunetsa kwemafuta edzimotokari munyika kuri kupa kuti vanhu vakawanda varare pamagaraji anotengesa mafuta kuitira kuti vawane mafuta aya.
Kunyange hazvo magaraji mazhinji anotengesa mafuta edzimotokari anga asina mafuta muHarare, vedzimotokari vakawanda vaswera vakamira mumitsetse mirefu refu vaine tarisiro yekuwana mafuta aya.
Vamwe vacho vanoti vakarara vari mumitsetse vakamirira kutenga mafuta.
Magaraji mashoma anga aine mafuta, anga achitengesera vanhu mafuta asingadarike marita makumi maviri pamotokari yega yega.
Mumwe muzvinamotokari, VaJames Magaringa, vaudza Studio7 kuti vave nemazuva mana vachitsvaka mafuta anotengeswa nemari yemuno vasingaawani. VaMagaringa vati vanhu vari kufambira dhongi rakaora kumagaraji anotengesa mafuta.
Mumwe mugari ari kunetsekana nenyaya iyi, VaThomas Ndavambi, vaudza Studio7kuti vazopedzisira vatsvaka madhora ekuAmerica kuti vakwanise kuwana mafuta. Vati dambudziko remafuta edzimotokari iri rakakura nekuti kunyange kumagaraji ari kutengesa mafuta edzimotokari nemari yekuAmerica uko kusingamboiti mitsetse, kwavawo nemitsetse mirefu.
VaNdabambi vati kushaikwa kwemafuta uku kunoita kuti vasakwanise kuronga nzendo dzezororo nemhuri yavo.
Vanotengesa mafuta edzimotokari vataura neStudio7 vati havasi kuwana mafuta edzimotokari uye hapana tsananguro kuti sei mafuta aya asiri kuwanikwa.
Mumwe muzvinagaraji asina kuda kudomwa nezita audza Studio7 kuti havasi kuwana mari yekunze kuti vahodhe mafuta uyemari yavari kutengesa nayo mafuta yemuno, ishoma zvichienderana nemari yavanotenga nayo.
Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvemhando dzemoto,VaFortune Chasi,sezvo vanga vasiri kubatika panharembozha yavo.
Mutauriri weZimbabwe Energy Regulatory Framework, VaGladman Njanji, vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira panguva dzataenda pamhepo.
Nyanzvi munyaya dzehupfumi dzinoti Zimbabwe iri kutadza kuwanira vanhu mafuta anovakwanira nepamusana pehurongwa hwayo husina kujeka pakutengwa nekutengeswa kwemafuta.
Gore rapera, Zimbabwe yakashandisa mabhiriyoni maviri nemazana maviri ezviuru zvemadhora mukutenga mafuta kunze kwenyika, asi mari yegore rino iri kutarisirwa kudarika mari yakashandiswa gera rapera, kunyange hazvo mafuta ari kuramba achinetsa kuwanamunyika.
Kunze kwemafuta, Zimbabwe yakatarisanawo nedambudziko rekushaya chikafu, mvura yakachena, uye magetsi.